Faallooyinka Adeegyada Amaahda Ardayga ee Harooyinka Weyn 2021
Bogga ugu weyn Faallooyinka Adeegyada Amaahda Ardayga ee Harooyinka Weyn 2021
Dib u bixinta deynta ardaygaaga waa inay ahaato mid aan dhib lahayn. Sidaas oo ay tahay, dhanka kale waa kiiska marka aad la shaqaynayso qaar ka mid ah adeegayaasha amaahda. Si kastaba ha noqotee, haddii adeegyada Amaahda Harooyinka Weyn ay yihiin adeegaha amaahdaada, markaa taasi waa taahaaga gargaarka. In kasta oo mid kasta oo ka mid ah adeegayaasha amaahda uusan isku mid ahayn, haddana Harooyinka Weyn ayaa ka mid ah adeegyada amaahda ugu fudud ee lala xiriiri karo.
In kasta oo Adeegyada Amaahda Ardayga ee Harooyinka Weyn ay wax badan ka qabtaan xagga adeegyada, xogta laga helay dib -u -eegista amaahda ardayga ee harooyinka Weyn waxay muujinayaan in dadku inta badan doorbidaan adeegyadooda oo leh ka -dhaafitaanno xaddidan. Celceliska dhibcaha Harooyinka Weyn waa 3.8 xiddigood oo ah 5. Inkasta oo dhibcaha celcelis ahaan aysan aad u cajabin, haddana waxay ugu sarreysaa inta kale. Sidaa darteed, waxaa jira waxyaabo dadku jecel yihiin oo ku saabsan Adeegyada Amaahda Ardayga ee Harooyinka Weyn.
Adeegayaasha amaahda ayaa mas'uul ka ah maaraynta amaahda ardayda federaalka. Mid ka mid ah doorarkooda muhiimka ah ayaa ah inay hubiyaan bixinta deynta waqtigeeda. Waxay kaloo caawiyaan ardayda raba inay hagaajiyaan qorshayaashooda lacag bixinta oo ay ka jawaabaan su'aalaha badanaa la isweydiiyo ee ku saabsan amaahda.
Ardayda doonaysa inay ogaadaan adeegyadooda amaahda waxay ku samayn karaan goobta Nidaamka Xogta Amaahda Qaranka ama la xiriir Xarunta Macluumaadka Gargaarka Ardayda Federaalka. Ardeyda adeegaha amaahda u ah Harooyinka Weyn, hoos waxaa ku qoran waxyaabaha ay tahay inay fahmaan Amaahda Ardayda Harooyinka Weyn.
Akhri: Amaahda Ardayda Bangiga America: Dib -u -maalgelinta iyo Beddelka
Maxaan uga jeednaa Adeegyada Amaahda Ardayga?
Waxaa lama huraan ah in la aqoonsado in adeegyada amaahdu ay yihiin uun waxa ay yihiin - adeeg -bixiyeyaashu maaha deyn -bixiye. Ardayda codsanaysa Amaahda Ardayda Federaalka waxay mari doonaan Waaxda Waxbarashada.
Si kastaba ha ahaatee, Waaxda Waxbarashadu waxay u xilsaartaa shirkad maareysa biilasha iyo adeegyada macmiilka. Shirkadda loo xilsaaray waxay noqonaysaa adeegaha amaahdaada.
Marka Waaxda Waxbarashadu kuu soo dirto amaahdaada, waxaad heleysaa adeegaha deynta. Si kale haddii loo dhigo, ma dooran kartid adeegaha amaahdaada.
Adeegyada Amaahda Ardayga ee Harooyinka Weyn
Adeegyada Amaahda Ardayga ee Harooyinka Weyn - oo guud ahaan loo yaqaan Great Lakes, ayaa ka mid ah tobanka shirkadood ee loo xilsaaray adeega Deynta Ardayga ee Federaalka.
Harooyinka waxay ka mid ahaayeen adeegyada amaahda ardayga ee ugu weyn oo ay weheliso shirkadda waalidka ee Nelnet. Shirkadda ayaa mas'uul ka ahayd in ka badan 6000 iskuul iyo malaayiin arday oo ku kala baahsan waddanka.
Adeegyada Amaahda Waxbarshada ee Harooyinka Weyn waxaa ugu horreeya Adeegaha Amaahda Federaalka. Si kastaba ha ahaatee, waxay sidoo kale adeegyo siiyaan amaahiyaha gaarka loo leeyahay.
Mas'uuliyadda Harooyinka Weyn waxaa ka mid ah u adeegidda Barnaamijka Amaahda Tooska ah ee Federaalka iyo Barnaamijka Amaahda Waxbarashada Qoyska ee Federaalka (FFELP), waxayna daboolayaan noocyada amaahda ee soo socda:
Toos Uma Bixin
Kaabis Toos ah
Isku -duwidda Tooska ah
PLUS Toos ah
Waajibaadka Adeegyada Amaahda Harooyinka Weyn
Haddii Harooyinka Weyn ay yihiin adeegaha amaahdaada, waxaad ku gaari kartaa adeegyada soo socda:
1. Dib -u -bixinta Deynta Ardayga:
loogu talagalay ardayda doonaysa inay bixiyaan lacagtooda billaha ah, iska diiwaangeliyaan bixinta otomaatiga ah, ama kordhiyaan lacagaha amaahda ardaydooda, adeegyada daryeelka macmiilka ee Harooyinka Weyn
Si kastaba ha ahaatee, waxaad ku heli kartaa qaar ka mid ah adeegyadooda onlaynka ah ama adoo adeegsanaya barnaamijkooda gacanta.
2. Helitaanka qorshayaasha lacag -bixinta ee Beddelka ah:
Harooyinka Weyn waxay ka caawin karaan ardayda aan awoodin qorshahooda dib -u -bixinta bil kasta inay helaan xalal kale oo dib -u -bixinta. Mid ka mid ah qorshayaasha noocaas ah waa istaraatiijiyad dib-u-bixinta dakhliga ku-saleysan oo tixgelinaysa dakhligaaga iyo baaxadda qoyskaaga.
Adeegayaasha amaahdaadu waxay kaloo kaa caawin karaan inay helaan siyaabo lagu yareeyo lacagahaaga billaha ah iyadoo lagu saleynayo xaaladdaada. Iyada oo ku xidhan xaaladdaada, ayaa laga yaabaa inaad u qalanto $ 0 dib -u -bixinta bil kasta.
Akhri: Sida Loo Helo Sicir -dhimista Ardayga ee eBay Sebtember | 2021
3. Isugeynta Amaahda Ardayga:
Ardayda haysata deymo badan oo federaal ah oo leh taariikho dib -u -bixin ayaa hadda isku dari kara amaahdaas.
Harooyinka waaweyni waxay ka caawin karaan inay fududeeyaan hababka lacag bixinta iyagoo adeegsanaya Deyn Isku -Darka Tooska ah ee Federaalka.
4. Dib -u -dhigista iyo Samirka:
Kuwa ay soo mareyso dhibaato dhaqaale sida gurmad caafimaad ama shaqo la'aan, adeegayaasha amaahda ayaa kaa caawin doona inaad codsato dib u dhigis amaah ama dulqaad.
5. Dambi dhaafka amaahda:
Kuwa u shaqeeya waqti-buuxa NGO ama hay'ad dawladeed, Harooyinka Weyn waxay ka caawin kartaa inay raacaan Dambi-dhaafka Amaahda Adeegga Dadweynaha (PSLF).
Murashaxiinta u qalma PSLF waxaa deyntooda lagu wareejin doonaa FedLoanServicing, oo mas'uul ka ah adeegayaasha amaahda PSLF.
Siyaabaha Loo Bixiyo Harooyinka Weyn
Waxaa jira siyaabo kala duwan oo aad ku bixin kartid harooyinka Weyn. Waxaa ka mid ah:
Phone: waxaad ku bixin kartaa lacag-bixinnada Harooyinka Weyn adoo adeegsanaya taleefanka adigoo la xiriiraya khadka daryeelka macaamiisha ee Harooyinka Weyn 1-800-236-4300.
Mail: kuwa doonaya inay bixiyaan iyagoo isticmaalaya jeeg waxay boostada ugu soo diri karaan Harooyinka Weyn. Ogow cinwaanka boostada wuxuu ku xiran yahay meesha aad joogto. Sidaa darteed, waa lama huraan inaad gasho koontadaada si aad u ogaato cinwaanka boostada ee saxda ah.
Barnaamijka gacanta: MyGreatLakes App waxaa laga heli karaa Google Play iyo Apple App Store. MyGreatLakes App wuxuu siiyaa macaamiisha hab ku habboon oo lacag looga bixiyo raaxada guryahooda iyadoo la adeegsanayo taleefanka casriga ah.
Online: Waxa kale oo aad ku samayn kartaa lacag -bixintaada Harooyinka Weyn bil kasta onlayn iyada oo loo marayo mareegtooda.
Tallaabo-Tallaabo-Qaadashada Lacag-bixinta Online-ka ah ee Harooyinka Weyn
Tallaabada 1: Abuur Koonto
Si aad ugu abuurto koonto Harooyinka Weyn, booqo website- oo guji "Saxiix" dhinaca midigta sare ee shaashadda. Goobtu waxay kaa dooni doontaa inaad bixiso taariikhda dhalashadaada iyo lambarka badbaadada bulshada.
Markaad gasho faahfaahinta loo baahan yahay, goobtu waxay kugu wargelin doontaa inaad abuurto magac isticmaale, furaha sirta ah, iyo PIN. Marka diiwaangelintaadu dhammaato, goobta ayaa xaqiijin doonta koontadaada.
Akhri: 10 Shirkadaha Amaahda Warshadaha leh Caymis
Tallaabada 2: Dooro Koontadaada Amaahda
Tallaabada xigta waa inaad doorato koontadaada amaahda oo aad barnaamijkaaga u diyaariso. Waxaa jira laba siyaabood oo jadwalka lacag -bixinta harooyinka Weyn, kuwaas oo ah:
Lacagaha otomaatiga ah ee soo noqnoqda
Nidaamka lacag-bixinta otomaatig ah ee soo noqnoqda ayaa ah doorasho weyn oo loogu talagalay kuwa aan bixin karin lacag hal mar ah. Bixinta otomaatigu waxay soo jiidataa 0.25% dhimis dulsaarka dulsaarka amaahda tooska ah.
Ogow, waxaa jira xeerar khuseeya dhammaan adeegayaasha bixinta amaahda ardayga. Mid ka mid ah xeerarka ayaa ah in dhammaan khidmadaha iyo danaha la sugayo, ee khuseeya deynta waa in marka hore la xalliyaa ka hor inta uusan adeeguhu u gudbin lacag bixinta maamulaha.
Kuwa bixiya lacago dheeri ah, qaddarka dheeraadka ah waxaa loo adeegsan doonaa adeegga dulsaarka urursan tan iyo lacagtii ugu dambeysay ee macmiilka. Lacagta hadhay, adeeguhu wuxuu ku dabaqayaa maamulaha deynta oo leh dulsaarka ugu sarreeya.
Si kastaba ha noqotee, haddii aad rabto in xad -dhaafka lagu dabaqo deyn kale, waxaad ku beddeli kartaa doorbididda koontadaada internetka adoo dooranaya Doorbidyada Lacag -dhaafka.
Waxyaabaha Dadku Ka Jeclaadaan Adeegyada Amaahda Ardayga ee Harooyinka Weyn
Sida laga soo xigtay sahannada, mid ka mid ah waxyaabaha dadku jecel yihiin amaahda Ardayga ee Harooyinka Weyn waa mareegaha ay adeegsadaan. Ardayda adeegsata Adeegyada Harooyinka Weyn waxay qirayaan in mareegtooda ay kuu oggolaanayso inaad awood u yeelato inaad wax ka beddesho taariikhaha lacag -bixinta deynta.
Websaydhku wuxuu kaloo bixiyaa macluumaad badan oo waxtar leh oo ku saabsan amaahda ardayda. Ardayda ayaa si fiican u iftiimiyay noocyada kala duwan ee amaahda iyo hababka dib u bixinta ee la heli karo.
Arrin kale oo ka dhigaysa Harooyinka Weyn mid ka fiican inta kale waa adeeggeeda daryeelka macaamiisha. In kasta oo ay jiraan arday yar oo khibrad xun u leh adeegyada daryeelka macaamiisha ee Harooyinka Weyn, guud ahaan, way ka fiican yihiin inta kale ee halkaa joogta.
Waxyaabaha Ay Dadku Ka Heli Waayaan Adeegyada Harooyinka Weyn
Maaha wax caadi ah in adeegyada amaahdu ay bixiyaan macluumaad qaldan oo ku saabsan heerka amaahda ardayga. Adeegyada Harooyinka Weyn ma aha kuwo ka khaldan qaladkan.
Waxa kale oo jira dhacdooyin ay Harooyinka Waaweyni iska diiwaangeliyeen dadka qorsheyaasha dib -u -bixinta. Xaaladaha badankood, tani si fiican uma shaqayn oo sinaba wax uma tarto.
Waa wax caadi ah in la helo “dib-u-bixin dakhli ku salaysan” markaad isku daydo inaad hesho codsigaaga. Si kastaba ha ahaatee, afarta qorshe ee IDR ee la heli karo, ma jiro mid leh sumaddaas oo ah magaceeda rasmiga ah.
Sida dhisme kasta oo kale oo weyn, Harooyinka Weyn waxay la kulmeen arrimo qaarkood sanadihii la soo dhaafay.
Akhri: Waa Maxay Amaahda Doc Aan Jirin? Wax kasta oo Aad U Baahan Tahay Inaad Ogaato
Sida ku xusan warbixin 2020 oo ka socota CFPB (Xafiiska Ilaalinta Maaliyadeed ee Macaamiisha), waxay ahaayeen 3,600 kiis oo amaah arday Federaal ah intii u dhexeysay Sebtember 2019 illaa Ogosto 2020 oo uu Xafiisku wax ka qabtay.
Boqolkiiba hal kiisaska waxay ku saabsan yihiin Adeegyada Harooyinka Weyn. In kasta oo ay aad u hooseyso marka la barbar dhigo kuwa kale, haddana waa arrin u baahan feejignaan.
Xarunta Ilaalinta Deyn-hayaha Ardayga ayaa gudbisay dacwad-qaadasho fasal bishii May 2020 oo ka dhan ah Great Hakes, Experian, Equifax, VantageScore, iyo TransUnion. Mid ka mid ah eedeymaha dacwadda ayaa ahaa in Harooyinka Weyn ay bixiyeen macluumaad been ah oo ku saabsan malaayiin macaamiisheeda ah Experian, Equifax, iyo TransUnion, taas oo dhaawacday sumcadda amaahdaas.
Marka loo eego Dacwada, Harooyinka Weyn ma aysan si wanaagsan u maaraynin Xeerka CARES Fidinta Faafida.
Waxaa lagama maarmaan ah inaad ogaato inaadan dooran karin adeegaha amaahdaada.
Sidaa darteed, haddii harooyinka waaweyni ay u adeegaan amaahdaada oo aadan ku qanacsanayn adeegooda, waxaad u qaadan kartaa inay tahay war wanaagsan in dawladdu aysan cusboonaysiin qandaraaskooda 2021.
Sidaa darteed, waxaad heli doontaa adeege amaah oo cusub. Xaqiiji inaad soo dirto dhammaan tabarucaadkaaga ugu yar marka lagaa rabo. Hubi inaad dib u eegto bayaannada xisaabtaada marmar oo aad si degdeg ah ugu soo sheegto khalad kasta shaqaalahaaga.
Harooyinka Weyn Amaahda Ardayga Dib -u -Eegid Buuxda 2021
Maalgelinta Baaskiilka 2021 -ka: 6 Deymaha Ugu Fiican Si Loo Helo
15 Shirkadaha Dayactirka Amaahda ugu Fiican 2021
Amaahda Qaadashada Ganacsiga
Amaahda iibsiga meheraddu waa meheradaha amaahda, franchises -ka ama kooxaha adeegsada si ay uga iibsadaan meherad hore u jirtay hay'adaha diyaar u ah…